Kuo: qalin qalin Apple, ama dib u soo celin amaba, ama USB-C iPhone-ka cusub 11 | Wararka IPhone
Kuo: qalin qalin Apple, ama dib u soo celinta amarka, ama USB-C ee iPhone 11 cusub
Luis Padilla | | iPhone 11, Noticias, dhowr
9to5Mac muuqaal asal ah
Saaxiibkeen qaaliga ah Ming-Chi Kuo wuxuu hadda mas'uul ka ahaa hoos u dhigista rajooyinka kahor dhacdada in saacado yar gudahood ka dhici doono Tiyaatarka Steve Jobs oo aan ku arki karno iPhone-ka cusub. Iskuduwaha wararka wuxuu xaqiijinayaa taas Telefoonada aan arki doonno berri ma lahaan doonaan dib u soo celin, mana la jaan qaadi doonaan qalinka Apple, sidoo kalena ma lahaan doonaan USB-C.
Falanqeeyaha ayaa ku andacooday sheegashooyinkaas iyadoo lagu saleynayo cidna ma oga waxa warbixinnada bixinaya, laakiin waxay sheeganeysaa in xeedho 18W lagu dari doono sanduuqa 'iPhone Pro' inaad awood u leedahay inaad isticmaasho lacagta degdegga ah adigoon iibsan qalab kale oo dheeri ah. Waxaan ku siineynaa dhammaan macluumaadka hoose.
Mid ka mid ah sheekooyinka cusub ee ficil ahaan loogu qaatay iPhones-ka cusub ayaa ahaa lacag soo rogis. Xaqiiqdii, wararkii ugu dambeeyay ee xaqiijinaya in astaanta tufaaxa, oo hadda loo wareejiyay bartamaha dhabarka iPhone, ay noqon doonto midka tilmaamaya halka aan dhigeyno AirPods ama Apple Watch si aan dib ugu buuxino adoo adeegsanaya batteriga iPhone. Madax-bannaani weyn oo ka mid ah moodelladan cusub ayaa u oggolaan doonta inay awood u yeeshaan inay adeegsadaan xoogaa millips ah si ay dib ugu soo celiyaan baytariyada laba aaladood oo leh is-maamul madaxbannaan oo ka weyn iPhone-ka, waana wax aan inbadan oo naga mid ahi fahmin, wax walba ayaa la yiraahdaa. Waa hagaag sida laga soo xigtay Ming-Chi Kuo lacagtan beddelka ah ma buuxin lahayn heerarka tayada ee Apple u baahan tahay waana taas sababta uu uga laaban lahaa daqiiqada ugu dambeysa.
Labada maqnaansho ee kale ayaa loo qaatay wax la iska siiyay. Waxaan sanado badan ku hadal haynay isbedelka ka soo baxa hillaaca ilaa USB-C ee iPhone-ka iyada oo aan waligiis dhicin, sanadkanna ma noqon doono mid ka duwan sidii hore sida uu qabo Kuo. Wax la mid ah ayaa ku dhaca qalinka Apple, in kasta oo ay xaqiiqda tahay in bilihii la soo dhaafay xanta lagu taageerayo waafaqsanaanta iPhone Pro ay badatay. Si kastaba ha noqotee, mid kale oo xan ah oo soo noqnoqday dhowr sano ayaa ugu dambeyntii la fulin karaa 2019: IPhone Pro waxaa ku jiri doona, sida laga soo xigtay Kuo, xeedho 18W ah, sida iPad Pro, iyo USB-C illaa hillaaca hillaaca, si dhakhso ah loogu buuxiyo boosteejooyinkan. IPhone "kaliya" (bedelka iPhone XR) waa inuu dejiyaa xeedho caadi ah oo illaa hadda dhammaan iPhone ay ku jiraan. Kuo ma heli doontaa daqiiqadahan ugu dambeeya saadaasha sax? Goor dhaw shaki ayaan ka tagi doonaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Kuo: qalin qalin Apple, ama dib u soo celinta amarka, ama USB-C ee iPhone 11 cusub
IPhones-ka cusub ee 2019-ka ayaa kor u qaadi doona qalabka wax-soo-saarka R1 ee loo yaqaan "Rose"
Apple wuxuu hagaajiyaa App Store algorithm si loo yareeyo jiritaanka barnaamijyadooda natiijooyinka